Articles Kbc Nepal | Hamro Patro
ब्लग - साहित्य/ को बन्छ करोडपति
चिन्नुहोस् १० जना लखपतिहरुलाई- अब पालो तपाईंको छ है !
- Mar 07 2019
नवौँ एपिसोडमा पहिलो करोडपति बन्लान त यी युवा ? (हेर्नुस् प्रोमो भिडियो)
को बन्छ करोडपतिको नवौँ एपिसोडको प्रोमो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो एपिसोड रोचक र ऐतिहासिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । को बन्छ करोडपति कार्यक्रममा अहिलेसम्म सर्वाधिक ३ लाख २० हजार रकम जितेका छन् । नवौँ एपिसोडको प्रोमोमा तराई मुलको जस्तो देखिने एक युवा सहभागि देखाइएको छ ।
- Feb 22 2019
को बन्छ करोडपतिले आफ्नो आठौँ एपिसोड कालीकोटमा विमान दुर्घटना मृत्यु भएका पाइलटहरुमा समर्पित गर्ने भएको छ । भोली शनिबार प्रशारण हुने कार्यक्रममा विमान दुर्घटनामा आफू मरेर पनि यात्रुहरुलाई बचाउने साहसी पाईलट दिनेश न्यौपाने र को-पाईलट सन्तोष रानाको परिवारलाई बोलाएर केबीसी खेलाइने भएको छ ।
को बन्छ करोडपतिले नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रमको दुनीयाँमा नौलो आयाम थपेको छ। सुरुवाति ७ एपिसोडमै केबीसी नेपाली दर्शकहरुको दैनिकी भैसकेको छ । युट्युबमा एकपछि अर्को एपिसोड ट्रेण्डिङमा आइरहेका छन भने हरेक शनिबार, आइतबार र सोमबार साँझको साढे आठ कुरिरहन्छन आमदर्शक टेलीभिजनमा ।
महानायक राजेश हमालले यस्तै कवितात्मक शैलीको भूमीका बाँधेर मञ्चमा प्रवेश गरे । दर्शकहरुको ताली रोकिएन । नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिएको भीएफएक्स प्रविधिमा जब महानायक हमालको बोली बग्दै गयो, टेलीभीजनमै हेर्ने दर्शकको पनि शरीरमा काँडा उम्रिदै गयो । बिहानीको लामो पर्खाइपछि सूर्य उदाए जस्तै स्क्रिनमा अन्ततः ज्योतिर्पुञ्जबाट ‘को बन्छ करोडपति’को लोगो नेपाली टेलिभिजन आकाशमा उदायो, एउटा नयाँ इतिहास कोरियो त्यहीँबाट । राजेश हमालले जब ‘यो मञ्च सारा नेपालीको मञ्च हो...’